David Alaba oo tijaabada caafimaadka u maray Kooxda Real Madrid… (Goorma ayuu ku biirayaa Los Blancos?) – Gool FM
(Madrid) 19 Jan 2021. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qarka u saaran inay la wareegto David Alaba.
Daafacan David Alaba ayaa ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Real Madrid, laakiin waxa uu naadiga ka dhisan caasimadda ku soo biiri doonaa marka uu soo dhammaysto heshiiska uu kula jiro Bayern Munich.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaysay in Kooxda Real Madrid ay heshiis la gaartay David Alaba.
Xiddigan reer Austria ayaa heshiiskiisa Kooxda Bayern Munich waxa uu ku eg yahay dhammaadka xagaagan, waxaana uu bilaash ugu biiri doonaa Real Madrid oo haatanba uu heshiis afar sanadood ah u saxiixay.
David Alaba ayaa ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Real Madrid, isagoo isku diyaarinaya inuu u dhaqaaqo horyaalka La Liga.